Lahatsoratra nataon'i Caroline Black momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Caroline Black
Caroline dia mpanoratra sy mpivarotra atiny Secure Thoughts. Manokana amin'ny fiarovana ny Aterineto, fantany ny fahavoazana mety hitranga amin'ny malware amin'ny fampielezankevitrao amin'ny Internet. Mahafantatra tsara ny fandrahonana an-tserasera sy ny mety hisian'ireo mpijirika an-keriny tranokala sy paikady fampiroboroboana izy. Amin'ny maha mpivarotra efa tranainy azy dia maniry hizara ny zavatra niainany tamin'ny olona mitovy hevitra aminy izy mba hahatonga ny internet ho toerana azo antoka kokoa.
Alatsinainy Desambra 5, 2016 Caroline Black
Ny taona manaraka dia kasaina ho taona manentana ho an'ny marketing nomerika, miaraka amin'ireo fanovana mpisava lalana tsy tambo isaina amin'ny tontolon'ny Internet. Ny Internet of Things ary ny firosoana amin'ny zava-misy virtoaly dia manome ny fahafaha-manao vaovao amin'ny varotra an-tserasera, ary ny fanavaozana vaovao amin'ny rindrambaiko dia mijanona eo an-toerana hatrany. Mampalahelo anefa fa tsy ny rehetra no mivoatra miabo. Isika izay miasa an-tserasera dia miatrika ny loza mety hitranga amin'ireo mpanao heloka bevava amin'ny Internet, izay tsy mahita sasatra mitady fomba vaovao hahazoana